मिथिला संस्कारमा नवरात्रि- विचार - कान्तिपुर समाचार
मिथिला संस्कारमा नवरात्रि
आश्विन १२, २०७४ अनिता यादव
काठमाडौँ — नवरात्रिमा प्रत्येक दिन दुर्गा माताका नौ स्वरूपको पूजा हुन्छ । मिथिलाञ्चलमा देवालयसहित प्रत्येक घरमा माताको पूजा–अर्चना गरिन्छ । माताको पूजा जुन दिन सुरु हुन्छ, त्यस दिनलाई मिथिलाञ्चलमा ‘कलश स्थापन’ भनिन्छ ।
यस दिन माता दुर्गाको फोटो या प्रतिमा अगाडि माटोको भाँडोमा जौं एवं तिल छरिन्छ तथा अष्टमी या नवमीमा कन्या पूजनका समय यो माटोको भाँडोबाट निकालिन्छ। यसलाई मैथिली भाषामा जयन्ती भनिन्छ। जयन्ती निकाल्नुको अर्थ माता दुर्गाले सबैलाई शक्ति दिउन् र अन्न, धन तथा आरोग्य रहनुको कृपा बनाइराखुन् भन्ने हुन्छ। मिथिला क्षेत्रमा कलश यात्रासहित घटस्थापना गरिन्छ। धार्मिक महत्त्वका नदी र तलाउबाट घडामा भरेर ल्याएका पूर्ण कलशको जलले देवी प्रतिमा र मन्दिर परिसर सिञ्चित गर्दै सोही जलको कलश स्थापना गरेर घटस्थापना विधि सम्पन्न गरिन्छ। मन्दिरमा जौं, तिल, धान, मकैसहितको जमरासमेत राखिन्छ।
जसरी संसारको रचना ब्रह्माण्डको अन्धकार गर्भबाट नौवटा ग्रहका रूपमा भयो, त्यसरी नै मानव जीवनको रचना पनि माताको गर्भमा नौ महिनाको अन्तरालमा हुन्छ। मनुष्य योनिका लागि गर्भका यी नौ महिना नवरात्रिकै सरह हुन्छन्। नवरात्रिको अर्थ शिव र शक्तिका नौ दुर्गाका रूपसँग सम्बन्धित छ, जसले संसारलाई प्रारम्भकालदेखि नै जीवनमा ऊर्जा प्रदान गरेका छन्। साथै संसार र प्रकृतिको बनावटमा स्त्रीशक्ति तथा माताको शक्तिको प्रधानतालाई स्पष्ट गरिदिएको छ। दुर्गा माताका विभिन्न स्वरूपको पूजा–अर्चना गर्न एक काठको फलियामा रातो कपडा बिछ्याएर त्यसमा चामलको गणेश, षोडश मातृका एवं नवग्रह बनाउनुपर्छ। पूजा स्थलको इशान कोणमा कलशको स्थापना गर्नुपर्छ। कलश तामा या माटोकै हुनुपर्छ। कलश मुनि बालुवा एवं गाईको गोबरको मिश्रणमा जौं मिलाएर पानीले त्यसलाई राम्ररी भिजाइदिनुपर्छ। यसो गर्नाले कलशमुनि अति सुन्दर जौं उम्रिन्छ। यसरी उम्रेकोलाई जमरा अथवा जयन्ती भनिन्छ।
काठको फलियामाथि दुई जलपात्र राख्नुपर्छ। एक जलपात्रमा पाँच पात भएको आँपको पल्लव लगाएर माटो, चाँदी या कासाको भाँडोमा घिउको दीयो जलाउनुपर्छ। कलश मुनि तेलको ज्योति जलाउनुपर्छ। किनकि तेलको ज्योतिले पापको नाश हुन्छ र घिउको दीपक जलाउनाले घरमा खुसी एवं आनन्द बनिरहन्छ। यी दुइटै ज्योति अखण्ड लगातार नौ दिनसम्म जल्दैरहनुपर्छ। ताकि माता भगवती दुर्गा हरहमेशा आफ्ना भक्तका सामु नै रहुन्। तेस्रो कलशमाथि पाँच आँपका पात भएको पल्लव लगाउनुपर्छ, काँचो नरिवल छिलेर स्वस्तिक चिन्ह बनाइराख्नुपर्छ एवं माटोको कलशमाथि पनि पाँच पात भएको पल्लव राखेर नरिवललाई राख्नुपर्छ। कुनै राम्रो एवं विद्वान ब्राह्मणद्वारा नवरात्रिको प्रतिपदाका दिनदेखि पूजापाठ गराउनुपर्छ र यो संकल्प लिनुपर्छ कि– हे माता मलाई तीनरूपी बलको प्राप्ति होस्।
अष्टमी या नवमीका दिन नौ कन्याको पूजा गरेर उनलाई भोजन गराउनुपर्छ। माताका सबै नौ रूपलाई रातो वस्त्र, रोली, रातो चन्दन, सिन्दूर, नयाँ रातो सारी, नयाँ रातो चोली, आभूषण तथा खानापिनाका सबै पदार्थ जुन रातो रङ्गका होउन्, उही अर्पित गर्नुपर्छ, किनकि रातो रङ्ग मातालाई धेरै मनपर्छ।
नौ दिनसम्म लगभग हर घरमा माता दुर्गाका नौवटा रूपको विधिवत् पूजा–अर्चना हुन्छ। जो मानिस कलश स्थापना गरेर पुरै नवरात्रि व्रत बसेर माता दुर्गाको उपसना गर्छन्, उसलाई नौ दिनसम्म माताका स्वरूप अनुसार रङ्गहरूका लुगा प्रयोग गर्नाले विशेष लाभ मिल्ने विश्वास लिइन्छ।
पहिलो दिन– नवरात्रिको पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा गरिन्छ। शैलपुत्रीको लुगाको रङ्ग रातो हुन्छ। यसैले नवरात्रिको प्रथम दिन रातो रङ्गको लुगा लगाउँदा राम्रो हुन्छ।
दोस्रो दिन– माता ब्रह्मचारिणीको पूजा गरिन्छ। यस दिन नवरात्र साधकहरूले निलो लुगा प्रयोग गर्नुपर्छ।
तेस्रो दिन– माता चन्द्रघण्टाको आराधना गरिन्छ। यसैले यस दिनमा साधकले पहेंँलो लुगा ज्यादा प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ।
चौथो दिन– माता दुर्गाको चौथो स्वरूप कुष्माण्डा देवी हुन्। यस दिन कुष्माण्डा देवीको स्तुति तथा पूजा गरिन्छ। यसैले चौथो दिन साधकहरूले हरियो लुगाहरूमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्छ।
पाँचौं दिन– माता स्कन्दमाताको उपासना गरिन्छ। यस दिन साधकहरूले खैरो रङ्गका लुगा लगाउनुपर्छ।
छैठौं दिन– माता दुर्गाको छैठौं स्वरूपको नाम कात्यानी देवी हो। यस दिन माता कात्यानी देवीको पूजन–अर्चन गरिन्छ। साधकहरूले सुन्तला रङ्गको लुगा लगाउनुपर्छ।
सातौं दिन– कालरात्रिको उपासना गरिन्छ। यस दिन साधकहरूले सफेद रङ्गका लुगा लगाउनाले लाभ मिल्छ।
आठौं दिन– दुर्गाको आठौं शक्ति महागौरीको पूजा गरिन्छ। महागौरीको स्वरूप गुलाबी रङ्गको हुन्छ, यसैले यो दिनमा साधहरूले गुलाबी रङ्गका लुगाहरूको अधिक प्रयोग गर्दा लाभ मिल्छ।
नौवौं दिन– आदि शक्तिको नवौं स्वरूप माता सिद्धदातृको आराधना गरिन्छ। माता सिद्धदातृको रङ्ग पूर्ण गौर वर्ण छ। यसैले नवौं दिन साधकहरूले सेतो लुगा लगाउनाले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ।
नवरात्रिमा अक्सर मान्छेहरू पुरै नौ दिनको व्रत बस्छन्। उपवास बस्दा पाचन प्रणालीसँग जोडिएका अङ्गहरूलाई आराम मिल्छ। यसबाट बचेको ऊर्जाको उपयोग आत्मचिकित्सा र आत्ममर्मतमा हुन्छ।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:४५
आश्विन १२, २०७४ प्रतिमा बाँस्कोटा
काठमाडौँ — दिनै गन्ने हो भने नेपाल छाडेर परदेशिएको दुई वर्ष पुग्न अब केही दिनमात्र छ । अर्थात तिहारको भाइटीकाको दिन दुइटा सुटकेस लघार्दै म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएकी थिएँ ।
त्यसपछिको दसैं बुबा स्वर्गवास हुनुभएका कारण मनाइएन। सायद त्यही भएर होला, अघिल्लो सालको दसैं खासै वास्ता भएन। तर यो पटकको दसंैले मनमा आँधीहुरी चलाइरहेको छ। यस्तो कुनै पल छैन, मन नेपाल नपुगेको होस्, घर नपुगेको होस्।
टेलिभिजनको देब्रे पट्टीको कुनामा अक्षता र जमरा टाँसिएको देख्दा मन हुरुक्कै भएर आउन थालेको छ। फेसबुक नचलाएको एक वर्ष नै हुनथाल्यो। नत्र फेसबुकमा आउने शुभकामना सन्देशले मनलाई अझै भुट्भुट्याउँथे होला। मन बुझाउन युट्युबबाट गीत निकालेर पेनड्राइभबाट गाडीमा बजाउँछु। गाडी चलाइरहँदा गीतसंँगै आफूलाई पनि नेपालमै भएको महसुस गराउँछु।
हुन त नेपालमा पनि आमाबुबासँगै घरमा बसेको त कहाँ हो र? पाँचथरबाट भविष्य खोज्दै आएपछि वर्षको एकपटक दसैंमा घर जाने गरिएको थियो। दसैं आउन दुई महिना बाँकी हुँदादेखि आमाबुबाले फोन गर्दा खसी कत्रो छ? दसैंमा लुगा के किनिदिएको छ? भन्दै सोधथ्यौँ। लुगा आफैं किनेर लगाउने त भएकी थिएँ, तर आमाबुबाले किनेर दिएको अलि खास हुन्थ्यो।
घरमा बसेका बुबाआमा छोराछोरी आउँछन् भनेर ६ महिना पहिलादेखि नै खसीको जोहो गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। माइलो दादा (दाजु) सेकुवा पोल्ने झिर बनाउन लाग्नुहुन्थ्यो। हुँदाहुँदा फिदिममा झिर राम्रो भएन भनेर असनबाट किनेर लैजानुहुन्थ्यो। अन्तिम पटक घर जाँदा टीकाको तेस्रो दिन बुबा बित्नुभएपछि दसैंको उमंग यतिकै सकियो। बुबा बिनाको पहिलो दसैं यो पाला मेरो घरमा मानिँदैछ। बुबा त संसारमा नै हुनुहुन्न, म भएर पनि टीका लगाउन घर जान सक्तिन। जानै नसक्ने बाध्यता नभए पनि परिस्थिति नमिल्ने रैछ।
यो दसैंलाई पनि खसी तयार भइसक्यो रे, आमाले तँ त आउँदिनस् नि छोरी भन्दै सोध्दा मन कटक्क खायो। अर्को साल आउँछु भनिदिएँ। ‘राम्रो भविष्य’ खोज्दै हिँड्दा घरपरिवार मात्र होइन, आफू हिँडेडुलेको सडक, माटो र माटोको बासना झलझली याद आउने रैछ। भविष्य काठमाडौंमा पनि नभएको होइन, दुईछाक खान पुगेकै थियो। असन्तोकी मनको अझ राम्रो खोज्दै हिँड्ने चाहनाले यहाँसम्म ल्यायो। काठमाडौंमा वर्षा रोकिने बित्तिकै चाडबाड आएको महसुस हुन्थ्यो। उदाएको निलो आकाश र आसपासका डाँडाले अझ मन रोमाञ्चित बनाउँथ्यो। भूकम्पले ढालेको कान्तिपुरको तिनकुनेस्थित भवनको चौथो तलाबाट डाँडाकाँडा हेर्दै दसैं आएको महसुस गरिन्थ्यो। काठमाडौं हुँदाताका सधैं काम गरेको साथी हिजो भेट हुँदा भन्दै थियो, नौरथ सुरु हुँदा बोनस आयो होला जस्तो लाग्यो रे। नौरथसँगै साथीभाइको दसैं पार्टी सुरु हुन्थ्यो। तास खेल्ने, रमाइलो गर्ने हुन्थ्यो।
काठमाडौं बस्ने दाजुभाइले नाइट बसको टिकट काटिसके रे। घर जान एक महिनाअघि नै काँकडभिट्टा पुग्ने बसको टिकट काटेपछि लाग्थ्यो, दसैं आइसक्यो। त्यसपछि हरेक दिन घरमा जान यति दिन बाँकी भन्दै औंला गनिन्थ्यो। काठमाडौं बसेर पनि घर जान नपाउने मान्छे साह्रै अभागी भनिन्थ्यो। अहिले दसैं आएको महसुससमेत गर्न नपाउँदा मन अत्तासिएको छ। मलाई मात्रै दसैंले यस्तो बनाएको हो कि सबै परदेशीलाई यस्तो हुने हो, थाहा छैन।
भारतले गरेको चरम नाकाबन्दीले बस नपाउँदा चक्रपथ चल्ने बसमा २१ घन्टा लगाएर अन्तिम पटक घर पुगिएकी थिएँ। नाइट बस चढेर घर जाँदा बिहान उज्यालो हुने बेला सप्तकोशी छेउछाउको बाजेको पेडातिर पुगिन्थ्यो। बसका सहचालकले शौचालय जानेहरू ओर्लिम–र्ओलिम भन्दै गाडीको ढोका ढकढक्याइले ब्युँझिएपछि मलाई शीतले माटो भिजाएर आउने सुगन्धले तान्थ्यो। नाकलाई आराम नदिइकन त्यो माटोको बासना लिन्थेँ। मानौं, बासना सकिँदैछ। फेरि बस कुद्न थालेपछि झ्यालको सिसा खोलेर आधा टाउको बाहिर निकाल्दै त्यो बासना नाकभित्र तान्थेंँ। घर पुगेपछि माहोल अर्कै हुन्थ्यो। बिहानै आमा र बुबाले चिया खान आओ भन्दै आँगनबाट बोलाएपछि आँखा मिच्दै तल झर्थ्यो। खाटमा बस्नुभएको बुबाको अनुहार हेरेर कुरा गर्न मिल्नेगरी हामी सिकुवाको पेटीमा बस्थ्यौं। अनि सुनाउँथ्यौं, काठमाडौंको जिन्दगी। काम, कमाइ, बसाइ आदि–आदि।
म पहिलो पटक आईए पढ्न काठमाडौं आएपछि एक महिनाका अन्तरालमा घर फर्किंदा बुबाले मेरो हात समात्दै हेरेर ‘मेरी चोर्नीका आँखा दुब्लाएछन्’ भन्दा दाजु, दिदीहरू सबै गललल हाँसेका थियौं। मेरा आँखा त दुब्लाएका थिए–थिएनन् थाहा छैन, तर बुबाका आँखा भने छोरीलाई हेर्न तर्सिएका पक्कै थिए। छोराछोरी घुम्ने कुर्सीमा बसेर काम गरेको हेर्ने रहर बुबालाई साह्रै थियो। घुम्ने मेचमा बसेर काम गर्छु भन्दा बुबाका आँखा रसाएका थिए। नरसाओस् पनि किन, दिनको ८ घन्टा हिँडेर हुलाकीको काम गर्ने बुबालाई छोराछोरीको प्रगति देख्दा हर्षका आँसु त आउने नै थिए। बिहान झिसमिस नहुँदै पछाडि झोला बोकेर लठ्ठी टेक्दै घरबाट ४ घन्टा लाग्ने बाटोमा पैदल हुलाक जानुहुन्थ्यो, अनि त्यही दिन अर्को ४ घन्टा हिँडेर त्यही लठ्ठी टेक्दै फर्कनुहुन्थ्यो।
अस्ति यहाँ (क्यालिफोर्निया) मा अलिकति पानी परेर बाटोको धुलो मारेको थियो। त्यसपछि आएको बासनाले मलाई नाइट बसको यात्रा सम्झायो। नेपालमा झैं दसैं त अमेरिका पनि आएकै छ। तर बिहान उठ्दा नेपालमा जस्तो महसुस गर्न नसकिने। लिंगेपिङ खेल्ने कुरा त परै जाओस्, टीका थाप्न जाने ठाउँको पनि समस्या पर्दोरैछ। टीका थाप्ने ठाउँ हुँदा पनि लगाइदिने मानिसको समय हेर्न पर्नेरैछ। परदेशमा याद आउनेभन्दा पनि बिर्सिन गाह्रो हुने यही चाडबाडका यादहरू रैछन्।
प्रकाशित : आश्विन १९, २०७४ १५:४२